8th HbbTV Symposium iyo Abaalmarinta 2019 Shortlists Fincons Group | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » Featured » 8th HbbTV Symposium iyo Abaalmarinta 2019 Shortlists Fincons Group
8th HbbTV Symposium iyo Abaalmarinta 2019 Shortlists Fincons Group
The Finkons Group waa hogaaminta ganacsiga latalinta IT-ga. Tan iyo 1983, Kooxda Finns waxay diiradda saartey dadaalkeeda ku aaddan hormarinta teknolojiyada, kuwaas oo ka caawiyay dhisida sumcadeeda. Waxaas oo dhami waxay u mahadnaqayaan awoodda shirkaddu u leedahay inay tarjunto oo ay saadaaliso qaabab ganacsi oo cusub sida dhaqsaha badan ee nidaamyada ku saleysan IT-ga.
Dabayaaqadii bishaan, sanadkaan Dood-wadaag HbbTV iyo Abaalmarinno 2019 waxaa lagu soo bandhigi doonaa mashruuca ugu dambeeya ee kooxda 'Finns Group' Platform Digital ah loogu talagalay warbaahinta iyo ganacsiyada baahinta. Bandhigga HbbTV iyo Abaalmarinta 2019 ayaa dhici doona Noofembar 21-22, 2019 ee MEGARON Athens International Conference Centre magaalada Athens ee dalka Giriiga. Xalkan ayaa ah kan ugu horreeya ee gebi ahaanba la jaan qaadi kara labada Yurub HbbTV iyo cusub Heerarka USA ATSC 3.0.
Astaamaha Aaladda Digital Digital ee Qalabka Fincon
Qalabka Smart Digital (SDP) waa qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka qaab-dhismeed dabacsan oo dabacsan oo si buuxda loo beddeli karo. Khadka ayaa si gaar ah loogu talagalay in lagu bixiyo labadaba Hybrid TV iyo OTT xalalka u shaqeeya sida xawaareynta xaaladaha cusub ee adeegga. Qalabka casriga ah ee loo yaqaan 'Digital Digital Platform' waxaa loo dhisay in lagu dhexgalo heerarkii ugu dambeeyay iyadoo loo diyaar garoobayo in la ballaariyo oo loo habeeyo nafsad ahaantiisa iyada oo la raacayo qaab cusub oo hal-abuurnimo tikniyoolajiyadeed ah oo midho dhalanaya.
Qalabka casriga ah ee Digital Digital Platform wuxuu ka soo baxaa khibradaha horyaalnimada ee Finense ee barnaamijyada HbbTV. Codsiyadaan waxaa ka mid ah kuwa sida fiican loo yaqaan Adeegga Ciyaarta ee Mediaset, Iyo sidoo kale Codsiyada ATSC. Labadan heerar waxay sii wadaan inay maraan isbeddel u saamaxaya inuu midba midka kale siiyo aqoon iyo dhiirrigelin cusub. Isbeddelkani wuxuu u sahlay Kooxda 'Finns Group' inay awood u yeeshaan kaalintooda gaarka ah ee qaabeynta mid ka mid ah qaab wanaagsan oo runtii la jaan qaada labada heerar. Awoodda is-waafajintaani waxay labadaba siisaa fursad qaas ah ganacsiyada madadaalada caalamiga ah iyo idaacadaha. Tani waxay muhiim u tahay jawi suuq caalami ah oo isku dhafan oo ay ciyaartoy cusub ku soo biiraan xooggaga sidoo kale waxyaabaha ay ka kooban yihiin si loo xoojiyo hantidooda loona gaaro qaybaha ballaaran ee suuqa ee dhaafaya xuduudaha heerka qaran.
Qaabdhismeedka "Digital Digital Platform" wuxuu gacan ka geystaa u adeegidda si macquul ah macquul ahaan Moodarada "SMART" kuwaas oo loogu talagalay inay u adeegaan sidii “dhismayaasha dhismooyinka” ee wixii xal Hybara TV ah. Nidaamka ayaa suuragal ka dhigaya in loo qaabeeyo bog kasta oo arji ah (oo ay ku jiraan badhanka), kaas oo u oggolaanaya inuu muujiyo astaamaha sida Tilmaamaha Barnaamijka Elektiroonigga ah (EPG), faahfaahinta kanaalka, fiidiyowyada qaybaha baahiyaha, iyo waxyaabaha la socon karo. Waxaas oo dhan waxaa mahad leh ka caawinta mashiinka moodeelka, iyo iyada oo loo marayo barnaamijyada barnaamijyada barnaamijyada (APIs), Smart Digital Platform wuxuu u oggolaanayaa isku-darka muujinta iyo qaababka xayeysiinta fiidiyowga is-dhexgalka.
Maxaa laga filan karaa HbbTV Symposium iyo Abaalmarinta 2019
Tusmada tusaalaha ah ee loo gudbiyey Dood-wadaag HbbTV iyo Abaalmarinno 2019 wuxuu muujiyaa sida barnaamijka loo yaqaan 'Digital Digital Platform' uu u fulin karo howlo sidii hal-abuur ahaan cusub ugu eg sida fiidiyowyada daawashada-smart. Tusaalahan qaaska ah wuxuu muujinayaa sida adeegyada mashiinada-barashada barashada loo isticmaali karo falanqaynta hantida fiidiyowga, halkaas oo isticmaale uu si gaar ah u eegi karo muuqaalada caanka ah iyada oo loo marayo farsamooyinka aqoonsiga wajiga. Tani waxay u oggolaan kartaa dadka isticmaala dhamaadka inay si toos ah ugu boodaan meeshii ay caanka ku aheyd, iyo iyagoo adeegsanaya Smart Digital Platform, waxay awood u yeelan doonaan inay si toos ah ugu wareegaan goos goosyo ay ka muuqdeen jilaayaasha ay jecel yihiin. Shaqada howshan waxay ka bilaabmi doontaa shaashado laysku habeyn karo halkaasoo arjiga si toos ah looga soo saaro midkood HbbTV2 ama Atsc3.0 code compliant. Muuqaalkan gaarka ah wuxuu u adeegaa albaab albaab u ah suurtagalnimada ballaadhan oo cusub iyo sababta oo ah qaab dhismeedkiisa iyo qaabkiisa isku dhafan, ganacsiyada waxay awood u yeelan doonaan inay ku soo laabtaan maalgashiga tallaabo kasta oo hawsha ah.
Kuxigeenka madaxa shirkadda Finns Group iyo maamule Fincons.US, Francesco Moretti
Kooxda Finns Group waxay u dirayaan qalabkooda casriga ah ee 'Digital Digital Platform' iyada oo ay weheliso aqoonsi wajiga ku shaqeeya oo farshaxannimo ku dheehan tahay. Intii ay munaasabadu socotay. Kuxigeenka madaxa shirkadda Finns Group iyo maamule Fincons.US, Francesco Moretti, wuxuu kaqeybqaadan doonaa fadhi miis wareeg oo heer sare ah oo mihnad ah halkaasoo Dr. Jörn Krieger u adeegi doona sidii modder Fadhiga miiska wareega waxa la odhan doonaa “HbbTV ma siisaa aaladaha saxda ah ee loogu talagalay wariyaasha iyo hawl wadeenada,” waxaana la qabanayaa Nofeembar 21st at 17: 10.
Madaxa Horumarinta Ganacsiga Caalamiga ah iyo Hal-abuurka, Oliver Botti
Iyada oo ay la socdaan Moretteir, Madaxa Madaxa horumarinta ganacsiga caalamiga ah iyo hal-abuurnimada, Oliver Botti, wuxuu dhexdhexaadinayaa guddi HbbTV ah iyo Heerar kale oo Isdhaxgal ah. Guddidan waxaa lagu qaban doonaa Noofembar 22nd 12: 10 halkaasoo uu kaga mid noqon doono dood kooxeed, oo uu dhexdhexaadinayo Mediaset's Angelo Pettazzi. Diiradda guud ee guddigu waxay kuxiran doontaa "Xayeysiinta Bartilmaameedka: Gobolka Ganacsiga ee Farshaxanka," kaas oo ka dhici doona Noofembar 21st 14: 40 halka dooddu ku xirnaan doonto 'Feejignaan' (iyo guul) tijaabooyinka suuqa HbbTV. Wadahadalka ayaa sameyn doona ku darso Mediaset Play labadii sano joogtada ah "tijaabada suuqa tooska ah" oo ku saabsan Waxyaabaha Isdhaafsiga iyo Xayeysiinta, iyada oo tixraac gaar ah loogu siidaayo siidaayaysa ugu dambeysa ee RT Beddelka Xayeysiinta Xayeysiinta.
Markii laga wada hadlayey heerarka HbbTV iyo ATSC 3.0, Francesco Moretti wuxuu sii waday inuu yiraahdo “Ka dib markii aan si aad ah uga shaqeynay labada HbbTV iyo heerarka ATSC 3.0, waxaan aad ugu faraxsanahay aaladda Digital Digital Platform, taasoo wadada u horseeda dabacsanaantiisa iyo culeyskeeda xalka. Waxaan ku faraxsanahay in aan la wadaago aaladda khubarada ku xeel dheer bulshada HbbTV waxaan aad u rajaynayaa in fikradaha aan is weydaarsado hogaamiyaasha wershadaha kale ee aqoon-isweydaarsiga. ”
Fama inka badan soddon sano, the Finkons Group Waxay ku guuleysatay guul weyn xagga warbaahinta xagga istaraatiijiyadda IT Partner. Guusha shirkaddu waxay ka dhalatay awooddeeda ay ku dhiseen iskaashi adag oo wax ku ool ah oo ay la yeeshaan macaamiisha ku saleysan xirfad iyo aaminaad. Laakiin taasi waa mid ka mid ah waxyaabaha ka dhigaya kooxda 'Finns Group' inay u taagnaato sidii a hogaaminta la tashiga ganacsiga IT markii nuxurka kalgacalku uu sameeyay muhiimadda tixraaca goorta Bixinta adeegyo baaxad weyn iyo xalal kala duwan
Horumarinta xalalka ganacsiga ee muhiimka ah
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan kooxda Finns, ka dib fiiri www.finconsgroup.com. Si aad iskaga diiwaangeliso 8th HbbTV Symposium iyo Awards 2019 ka dib riix halkan.
Codsade Wuxuu Soo Bandhigi Doonaa Maaraynta Qalabka "SaaS App" ee 2020 NAB Show - January 22, 2020
Moodarada "SMART" Codsiyada ATSC Broadcast Engineer Broadcast Engineering kooxda finnishka JADWALKA, Nidaamyada Variant, Graham Chapman Prmoted toEditor hbbtv Dood-wadaag HbbTV iyo Abaalmarinno 2019 dhexgalka La-tashiga ganacsiga IT Nidaamyada ku saleysan IT-ga Adeegga Ciyaarta ee Mediaset Ott Qalabka Smart Digital Ultra HD Forum Video Engineer	2019-11-14
Previous: Darajooyinka 'Remesh CP Fasallada' Habeennada Kumbalangi 'iyo Daraasiin Filimno Kale ah oo ay la socdaan DaVinci Resolve
Next: PixStor Kaydinta waxay xaqiijineysaa Sawir Jellyfish wuxuu la kulmaa Shuruudaha A-Liiska Amniga ee Mashaariicda Xanibaadaha